DF Somaliya oo maanta Ciidamo iyo Hub culus geysay Dhuusamareeb & Xaaladda oo Kacsan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya oo maanta Ciidamo iyo Hub culus geysay Dhuusamareeb & Xaaladda...
DF Somaliya oo maanta Ciidamo iyo Hub culus geysay Dhuusamareeb & Xaaladda oo Kacsan
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa ku warramaya in maanta Magaaladaas ka dageen diyaarado waday Ciidamo dheeraad ah iyo saanad ciidan.
Ilaa 5-diyaaradood oo ka baxay Magaaladda Muqdisho, ayaa ka dagay garoonka diyaaradaha Magaaladdda Dhuusamareeb, waxaana ciiidamadda la geeyay xarumihii loogu talagalay.
Tallaabooyinkan ayaa ka dhigan in dowladda Federaalka ay si buuxda u adkeyneyso joogitaankeeda Dhuusamareeb oo dhowaan lagu wado inuu ka dhaco shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug.
Magaalada Dhuusamareeb waxaa horay loo geeyay Ciidamo uu hoggaaminaayo Sarkaal lagu magacaabo Farxaan Qaroole oo ka mid ahaay Saraakiishii maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku biiray Nabad Suggida, markii dambana Booliska lagu soo daray.
Wixii warar ah ee ku soo kordha kala soco Halqaran.com insha allaah.
DF Somaliya oo maanta Ciidamo
Hub culus geysay